Kitty For Me: June 2008
Beijing Huan Ying Ni Music Video
Download Part 1 [MF]
Download Part2[MF]
Download Part3[MF]
Download Part4[MF]
Posted by Me at 10:18 AM3comments:
Labels: Beijing Huan Ying Ni Music Video, download
Ock Joo Hyun - Honey
Posted by Me at 10:16 AM2comments:
Labels: Honey, Ock Joo Hyun, Ock Joo Hyun Honey
ဒီသီချင်းလေးကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ Olympic အတွက်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ထွက်တာတော့ကြာနေပါပြီ။ နားမထောင်ဖြစ်ဘူး။ ဟိုတစ်နေ့ကမှ သူငယ်ချင်းက အိမ်လာတော့ စက်ထဲမှာ အဲဒီ MTV လေးတွေ့တော့ သူက ကောင်းတယ် ပြန်ကြည့်ရအောင် ဆိုတော့မှ MV လေးလဲကြည့်ဖြစ်ပြီး ကြိုက်သွားတာ။ download လုပ်ထားတုန်းကတော့ Super Junior ထဲက Han Kyun ပါတယ် ဆိုပြီး လုပ်ထားတာ။ ပြီးတော့မေ့နေရော။
Posted by Me at 9:58 AM 1 comment:
Labels: Beijing Huan Ying Ni, Beijing Welcome You
Battle - SES Dance
Battle အဖွဲ့ထဲ့ Tae Hwa, Chirs, Ki Yong တို့ ၃ ယောက် SES သီချင်းလေးနဲ့ ကထားပါ။ မိန်းကလေး သီချင်းဆိုတော့ ဂါဝန်ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်အောင်လဲ ၀တ်လိုက်သေးတယ်။ တော်တော်တော့ ကြာပြီနဲ့တူပါတယ်။ အခုမှ အဲဒီ clip လေးကိုတွေ့တာ။ SES သီချင်းလေးက ချစ်စရာလေး။ ဘာသီချင်းလဲတော့ မသိဘူး။
Labels: Battle, Battle SES Dance
20 Jun 2008 Music Bank Backstage - Battle Shuffle Dance
အခုတစ်လော အရမ်းကြိုက်နေတဲ့ Battle အဖွဲ့ရဲ့ အရမ်းရီရတဲ့ Dance Clip လေးပါ။ Tae Hwa က ရှေ့ကနေ သူတို့ Step By Step ထဲက ကကွက်တစ်ချို့ကို သင်ပေးတယ်။ နောက်က Lio, Ryu, Chris တို့ ၃ ယောက်က လိုက်ကပြတယ်။ ဒါပေမယ့် Lio နဲ့ Ryu တို့က တစ်ကွက်ပိုပိုပြီးကတယ်။ အစကတော့ Tae Hwa က ဘာမှမပြောဘူး။ နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်တော့ စိတ်တိုလာတယ်နဲ့တူပါတယ်။ Ryu ကို လှမ်းရိုက်တယ်။ Chris ကလဲ အချောင် Ryu ကို လှမ်းရိုက်တယ်။ အရမ်းရီရတယ် နောက်ဆုံးကတဲ့အခန်းက... ခဏခဏကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကြည့်တိုင်းလဲ ရီနေရတယ်။
Music Bank Backstage - Battle Shuffle Dance
Labels: Battle, Battle Shuffle Dance, Music Bank Backstage
Epik High - Pieces, Part One (Volume 5)
03.Short Piece [MF]
08.The Future [MF]
11.Eight By Eight [MF]
13.Icarus Walks [MF]
14.Falling Flower [MF]
17.Breakdown (Supreme Mix) [MF]
18.One (Planet Shiver Remix) [MF]
Posted by Me at 11:35 PM 48 comments:
Labels: download, Epik High, One, Pieces
Epik High - One Music Video
Epik High ရဲ့ အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ အခွေထဲမှာ One နဲ့ Break Down ၂ ပုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ One သီချင်းထဲမှာ Loveholic ထဲက ကောင်မလေးက feat ဆိုထားတယ်။ သူ့အသံလေးက အသံလေးအေးအေးလေး။ Loveholic သီချင်းလေးတွေလဲ ကောင်းတယ်။ One ထဲမှာ နာရီစက်သံ Tick Tick ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေနဲ့...
Epik High - One [Translation]
I've become an enemy in the mirror, doesn't it hurt?
[I'll] keep anyone from knowing about you, [I'll] leave the breath to tighten out I'll force you to choose the end, (aren't I bad?), I'll take away all reason in this world for you to to stand
Without the choice of the road back, [I guess] you'll walk to the end
Wounds... Scars... Tears... Flowing
You are wandering through death, (I'll save you...)
When you're walking in shadows
(When I'm panicking in the shadows, my breath does the same)
I'll reach my hand out to you
(When all the doors in the world close for me, I'll support you with my hand)
Your hand set the world on fire, You closed everyone's eyes
Are your still dreaming, sleeping? Are you measuring all the tears you've shed?
Hope isapaper boat that sinks, isn't it sad?
Maybe you wake up drenched in sweat at night, Is consciousness crawling on the floor? Are you thinking it's the end, are you ok? 'cause I understand (Tablo)
I'mascar on your broken body, I'll erase the tears you've hidden away in your shattered marriage
I'll grab your hand With my hand and trust you
(When all the doors in the world close, I'll support you with my hand)
Lyrics Credit to : soompi forum
Labels: download, Epik High, One
Epik High - Break Down Music Video
Epik High ရဲ့ MV Break Down ကို ကြည့်ရတာလဲ Saw, Hostel တို့ ကြည့်ရသလိုပဲ။ ကြောက်စရာကြီး။ သူတို့ ၃ ယောက်စလုံးကလဲ ၀င်ပြီးသရုပ်ဆောင်ထားတယ်။ သီချင်းကတော့ ကြိုက်တယ်။ အစက Epik High ကို လုံးဝကြည့်မရဘူး။ အခုတော့လဲ ကြိုက်လိုက်တာ။
I don't wanna see like you,
and I don't wanna be like you,
and I wanna be free, so break it down.
I don't wanna think like you,
and I don't wanna stink like you,
and I wanna be me, so break it down.
Epik High - Break Down
Labels: Break Down, download, Epik High
Battle - Step By Step Music Video
အခု ခဏခဏကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ MV ကတော့ Battle ရဲ့ Step By Step ။ သီချင်းလေးကလဲ မြူးတယ်။ ကတာလဲ လှတယ်။ လူတွေကလဲ ပုံစံတွေ ပြောင်းထားတော့ မနည်းကို ဘယ်သူတွေလဲလို့ လိုက်ကြည့်ရတယ်။ Lio က ကျစ်ဆံမြည်းဆံပင်နဲ့ မိုက်တယ်။ Chirs ရဲ့ ဆံပင်အဖြူကိုတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ သိပ်မလှသလိုပဲ။ Hwi Chan ရဲ့ ဆံပင်ကတော့ အဆိုးဆုံးပဲ။ သူနဲ့ မလိုက်ဘူး။ Ryu လဲမိုက်တယ်။ Tae Hwa ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။
Lio Hwi Chan
Christ Tae Hwa
Labels: Battle, download, Step By Step
အခု အသစ်ထွက်တဲ့ အခွေတွေထဲမှာ သူတို့အခွေကို ကြိုက်တယ်။ Shinee ထက်တောင် ပိုကြိုက်သေးတယ်။ Title သီချင်း 1234 Back က တီးလုံးလေးတွေလဲ ချစ်စရာလေး။ က တာကတော့ Shinee က ပိုကောင်းတယ်။ A'St1 က ကတာ သာမန်ပါပဲ။ ထူးထူးခြားခြား တစ်အားကြီး မကောင်းဘူး။ သီချင်းလေးတွေတော့ ကောင်းတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာလဲ တရုတ်တစ်ယောက်၊ ဂျပန်တစ်ယောက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၄ ယောက်က ကိုရီးယား။ (မြန်မာနဲ့ ဘယ်တော့များ ဖက်စပ်လုပ်ပြီးဆိုမလဲ မသိဘူးနော်.. :D )
A'Star1 - 1234 Back
01 . 1.2.3.4. Back
02 . Show
03 . Funky N Roll Tonight
05 . 내가 바보였어
Posted by Me at 2:25 AM No comments:
စောင့်မျှော်နေတဲ့ Battle (Shinhwa Battle) ရဲ့ Single Album ထွက်လာပါပြီ။ ထွက်တာတော့ နဲနဲတော့ ကြာသွားပြီ။ ဘလော့ရေးရမှာ ပျင်းနေတာနဲ့ အခုမှပဲ တင်ဖြစ်တော့တယ်။ Single Albume ဆိုတော့ သီချင်းကတော့ ၃ ပုဒ်ပဲပါတယ်။ ၃ ပုဒ်လုံး ကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ် Luv U ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ xxxx
01. Big Change [MF]
02. Step by Step [MF]
03. Luv U [MF]
Hey I can't explain my feeling to U
You Know I promise U Always I Luv U
Always I luv u baby boo, I swear to God I'll reach out and grab you
Tell me the whole time I'd really wait for you
Because of Luv U Luv U I love you my everything you'll want to Luv U
All Luv U I'll defend you Luv U Luv U I'll be by your side
The many things I cannot do (You can laugh)
Seriously, looking at me you'll have less interest (Too shabby)
That's all I have, but I feel I have more
I think about this all day, stay with me the whole time All days
I confess my heart, Babe, answer this for me personally
Though you don't have any answers today, anyone is still beautiful
You never know, you cannot substitute for what I am, my love for Ma luv
Always I Luv U Baby Boo
I swear to God I'll reach out and grab you, please
Tell Me the whole time you want me bad.
Memories of time spent together piled up
Twenty thousand miles traveling Fallin again
Hey always by my side so I need you baby.
I'll just go wherever I only hope I'll be there the whole time ok
The visible future is small but my mind views it with happiness (it's visible)
When you're in my mind I'll laugh and smile, I love you
Two hands together, I pray for you. Stand still forever,
not even to die. I'll protect you the whole time.
Rararal raralrara rararal love, I'll love you raralrara rararal raralrara rararal
Raralrara rararal raralrara protect you and only you rararal
lyric credit to : soompi
၁၂ ရက် မေ လအထိ လက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေများကို ဘိုကလေးမြို့မှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အလှူလုပ်ပေး ကူညီပေးနေတဲ့ အသိမိတ်ဆွေဆီကို လှူဒါန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သားပစ် မယားပစ် အိုးပစ် အိမ်ပစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ အသိမိတ်ဆွေ အစ်ကိုတစ်ယောက် အကြောင်းကို ဒီမှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၁၂ ရက် မေလ နောက်ပိုင်းမှာ ထပ်မံရရှိတဲ့ အလှူငွေကိုတော့ ရန်ကုန်မြို့သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။
20 Jun 2008 Music Bank Backstage - Battle Shuffle ...